China Crowd control block Factory, mpamatsy sakana fanaraha-maso ny vahoaka
sakana fanaraha-maso ny vahoaka
Ny sakana amin'ny fanaraha-maso ny valalabemandry dia amboarina amin'ny fenitra mitovy kalitao sy ny fomba fitiliana henjana toy ny vokatra fencing vonjimaika. Izy ireo dia nohosorana tànana hahazoana tanjaka, manana rafitra mora mifangaro ho an'ny fametrahana sy tongotra azo esorina mba hipetraka sy hitahiry mora foana. Ny barazy fanaraha-maso ny mpandeha an-tongotra / vahoaka dia hanatsara ny rafitra fiarovana sy filaharana. Miaraka amin'ny famolavolana tongotra fisaka hisorohana ny loza ateraky ny dia ary hamaly ny fepetra takian'ny OH&S azonao atao ny manome toky fa mividy ireo sakana avo lenta avo indrindra eny an-tsena ao Aostralia ianao.
Ireo sakana tsy voafehy ho an'ny vahoaka
Sakanana fanaraha-maso ny valin'ny vy
Sakana fiarovana ny fifamoivoizana